photoshop - စာမျက်နှာ5- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: photoshop (စာမျက်နှာ 5)
စာတန်းထိုး / စာတန်းကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်နို့ဗိုင်း, Duration: TBD လစာ / နှုန်း $ 50- $ 100 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့စုဆောင်းဖို့ရှာကြံနေသောယောဘသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 30 / 05 / 15 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုယောဘ၏ 19 မိနစ်နှုန်း တက်-and လာမယ့်စာတမ်းထိုး / စာတန်းထိုးဦးစီးဌာန။ ဤသည်ဖြစ်ခြင်းကာလဘို့ On-ခေါ်ဆိုခ, ဝေးလံသောအနေအထားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်ပါဘာသာစကားများအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စား: ...
broadcast ကို Maintenance Engineer အကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဘတ်ဖလိုး, နယူးယော့ Duration: ပေးမ 05 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘယောဘကိုထုတ်လွှင့်ကို Maintenance Engineer အဘတ်ဖလိုး, နယူးယော့, ယူနိုက်တက်စတိတ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ - အချိန်ပြည့် WNED | WBFO အားလုံးပြည်တွင်းဖြစ်အစီအစဉ်သုံးခုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်နှစ်ဦးကိုရေဒီယို station ပါဝင်သည်ဟုဦးဆောင် bi-အမျိုးသားရေးအများပြည်သူအသံလွှင့်ဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ...
ဗီဒီယိုတစ်မိနစ်လျှင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးစပိန် Transcriptionists ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Sunland ပန်းခြံ, မိုင် Duration: TBD လစာ / နှုန်း $ 1.10 05 / 15 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ယောဘ Daily သတင်းစာကူးယူမှတ်တမ်းတင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး Transcribe ရှာကူးယူန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမယောဘကိုကူးရေးသော အင်္ဂလိပ်နှင့်စပိန်ကျွမ်းကျင်စွာ။ သငျသညျ, စပိနျကနေစပိန်မှဗီဒီယိုများ / အသံကူးယူနိုင်စွမ်းလို ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration:5/ 29 / 19 လစာ / နှုန်း $ 150 ယောဘသည် 05 / 15 / 19 05 / 22 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ခေါင်းကိုပြောနေတာယောဘအကူအညီကင်မရာအော်ပရေတာအကငျြ့အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted အင်တာဗျူးများ။ / ထုပ်ပိုးပြီးကို set up ကိုကူညီပါ။ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာများ၏လိုအပ်ချက်များကို Assist ။ approx ။3နာရီယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဘို့အ Now ကို Upgrade? မှတ်ပုံတင်ရန် ကျေးဇူးပြု. ...
အန်ကုဒ်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Burbank,, CA Duration: အချိန်ပြည့်, Swing Shift လစာ / နှုန်း DOE ယောဘသည် 05 / 15 / 19 06 / 07 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘ FotoKem တစ်ဦးဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted Burbank အတွက် post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီကိုထောကျပံ့ကူညီတခုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာရှာဖွေနေသည်။ FotoKem မှဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးသည် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်သူ / ထိပ်တန်းသတင်းထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Waco, တက္ကဆပ် Duration: 04 / 04 / 19 04 / 30 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘ KWTX သတင်းများ 10 တစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှာကြံအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘမပေးထား ကျမ်းစာ၌ရေးထားပေါင်းစည်းဖို့ထုတ်လုပ်သူ / ထိပ်တန်းသတင်းထုတ်လုပ်သူ / အယ်ဒီတာ, ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အားလုံးဘူတာရုံလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းပုံပြင်များသို့ဗီဒီယိုနှင့်အော်ဒီယိုအကြောင်းအရာ။ ဒီအ ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Medford, OR Duration:4/ 8 -4/ 10 လစာ / နှုန်း MFR လေဆိပ်အနီးကို PA (Medford, OR) ရှာယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထားဆိုင်းငံ့ထားခွင့်ပြုချက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုယောဘပေးဘူး။ ရက်စွဲများ:4/ 8 -4/ 10 နှုန်း: နှုန်း diem နှင့် Mt Shasta အတွက်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်အတူတစ် 12 နာရီနေ့၌အခြေစိုက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစံ။ ဝမ်းနည်းပါတယ် ...
ကုမ္ပဏီ 04 / 04 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ရုဂျြ LA က Duration: မပေးထားလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးယောဘယောဘသည် WAFB-TV ကိုအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမသတင်းထုတ်လုပ်သူရုဂျြဝီဇီယားနားမှာရှိတဲ့ဖြစ်သော CBS Affiliate ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မစ္စစ္စပီအတွက် Louisiana နဲ့ 13 ခုအတွက် 3-စီရင်စုနယ်ဧရိယာဝန်ဆောင်မှုပေး။ WAFB-TV ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 10pm နင်္လာမှသောကြာများအတွက်ထုတ်လုပ်သူရှာကြံနေပါတယ် ...
Meteorologist ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Waco, တက္ကဆပ် Duration: အမြဲတမ်းလစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 04 / 04 / 19 04 / 30 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘ KWTX-TV ကို, Waco အတွက်ကြီးစိုး #1 ဘူတာရုံအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted , TX ဟာသူ့ရဲ့ညနပေိုငျးထိပ်တန်းသတင်းများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိအချိန်ပြည့် meteorologist ရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါစံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လိုအာရုံစိုက်တဲ့ပြောင်းလဲနေသောတင်ဆက်မှုရပါလိမ့်မယ် ...
MA Duration:4/ 12 &4/ 13 လစာ / နှုန်း $ 200 / 12 ယောဘသည် 04 / 04 / 19 04 / 12 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လေယာဉ်အမှုထမ်းခေါ်ရန်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်ဘော်စတွန်, - ကသာဘော်စတွန်ဒေသခံများက ကျေးဇူးပြု. (မျှခရီးသွားပေး) ။ သောကြာနေ့ -4/ 12 (က 10hr နေ့က @ အားလုံးနှုန်းထားများ) ကိရိယာအစုံ / w ကိရိယာအစုံ $ 500 Gaffer $ 550 ဆုပ်ကိုင် $ 400 အသံ / w HMU ...
အသံ Recordist ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration:5/4လစာ / နှုန်း 04 / 04 / 19 05 / 04 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျွန်မအသံ Recordist ကိုရှာနေပါတယ်ယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး Los Angeles မြို့ CA. မှဒေသခံ : DATE မေလ 4th တွင် TIME: 10AM-4PM EVENT သည်: doc များအတွက်လူမှုရေး event မှာအင်တာဗျူးများရုန်းမင်း။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိရမည် ...
stylist ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့ Wardrobe,, CA Duration: ဧပြီလ 19-20 လစာ / နှုန်း TBD ယောဘသည် 04 / 04 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် / ပိတ်များအတွက်စီးပွားဖြစ် / ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်အပြောက်တစ်ခုဗီရို stylist ရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား စာရွက်ကုမ္ပဏီ။ မြင်ကွင်းတစ်ခု: အအိပ်ခန်းထဲမှာ3သရုပ်ဆောင်များကို။ အစုစု / အတွေ့အကြုံ, prep နှင့်ရိုက်ကူးရေးနှုန်းထားများတင်ပြပေးပါ။ Must ...
Gaffer ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ်ဘော်စတွန်,4/ 12 လစာ / နှုန်း $ 550 ယောဘသည် 04 / 04 / 19 အပေါ် posted MA Duration: 04 / 12 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ယောဘကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လေယာဉ်အမှုထမ်းခေါ်ရန်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ - ဘော့စတွန်ဒေသခံများကသာလျှင် ကျေးဇူးပြု. (မျှ ထောက်ပံ့ခရီးသွား) ။ သောကြာနေ့ -4/ 12 (က 10hr နေ့က @ အားလုံးနှုန်းထားများ) HMU ကိရိယာအစုံ $ 500 Gaffer $ 550 ဆုပ်ကိုင် $ 400 အသံ / w ကိရိယာအစုံ $ 800 ကို PA (4 / 12 / w ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration:4/ 10 -4/ 12 လစာ / နှုန်းထောက်ပံ့ပေးမပေးကိုယောဘ 04 / 04 / 19 အပေါ် posted ယောဘတစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 04 / 10 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply 04 / 10, 04 / 11 နှင့် 04 / 12 ရိုက်ကူး, စီးပွားဖြစ်စီမံကိနျးအတှကျ Los Angeles မြို့အခြေစိုက် pas ရှာဖွေနေသည်။ Mandarin စပီကာပိုမိုနှစ်သက်ပေမယ့်မဖြစ်ပါတယ် ...
ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ / အနုပညာဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်စီးတီး, ပြည်နယ် Los Angeles မြို့,, CA Duration: ရိုက်ကူးမှုနေ့စွဲများ, ဧပြီ 19-20 လစာ / နှုန်း TBD ယောဘသည်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ / အနုပညာဒါရိုက်တာရှာဖွေနေယောဘအကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 04 / 04 / 19 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် တစ်ဦးသည်ပိတ် / စာရွက်ကုမ္ပဏီအတွက်စီးပွားဖြစ် / ဒစ်ဂျစ်တယ်စက်အပြောက်။ မြင်ကွင်းတစ်ခု: အအိပ်ခန်းထဲမှာစုံတွဲ။ , အစုစုကိုတင်ပြရန် ကျေးဇူးပြု. ...
5 ၏စာမျက်နှာ 420«ပထမဦးစွာ...«34567	»	102030...နောက်ဆုံး»